Korea: Ny toetra araka ny sokajindra · Global Voices teny Malagasy
Korea: Ny toetra araka ny sokajindra	Voadika ny 24 Septambra 2007 15:56 GMT
Zarao: Manambara ny mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’Yonsei fa vao nahatontosa fikarohana manaporofo fa samihafa araka ny sokajin-dra ny toetra manokana mahaizy ny olona iray (personality). Niorina tamina volavolam-pikarohana 50 mikasika ny karazana sokajin-dran’ny mpianatra teratany sy vahiny, noraisin-dry zareo hanampy (isa) ny valim-pikarohana ihany koa ny tranga hafa re sy ny traika efa niainana tamin’ny ankapobeny (na fitsarana ivelany) teo amin’ny kolontsaim-bahoaka ary noesorina (na nanesorana isa) kosa ireo tranga manohitra ilay fifandraisan’ny sokajin-dra sy ny toetra manokana mahaizy ny olona iray. Izany hoe araka ny fahazoan’ny mpandika teny malagasy azy dia notefena tsikelikely araka ny zavanisy hitandry zareo aloha vao tonga tamin’ny valim-pikarohana nanaovan-dry zareo fanambarana io.
Nofehezin’i Skillyou ilay valim-pikarohana :
혈액형 내향성 논리성 안정성 리더쉽 사려성
O -15 1 6 3 0
…Misy zava-mahagaga ilay valim-pikarohana, jereo ireo manana sokajin-dra B. Efa fantatra tamin’ny ankapobeny fa ratsy toetra ny olona manana sokajin-dra B. Ary dia namoaka izay tokoa ny taratasy. Karazana tabilao ity soratako manaraka ity:
Sokajin-dra Fitodihanaanaty Fandaharankevitra Mahatoky Fitarihana Fanajana
Be fandinihantena (intraverti), misaina, mahatoky ary maranitra ny sojaky A. Tsara kosa koa!
Be resaka sady mahatoky ary tena natao ho mpitarika olona ny manana sokajin-dra O. Tsara sy mandeha ilalana ny sokajindra AB. Fa jereo anie ilay sokanjin-dra B e: fandinihantena -6, fandaharankevitra -7, fahatokisana (na fananana fotokevitra mazava ihany koa) -7, fitarihana olona -1, Fanajana -3; vendrana, tsy azo itokisana, ary tsy mahay mitondra olona… Tsy vitsy ny tahaka an’I pk46 no manakiana azy ho fitarihana ny olona hanana fiheverena mialoha raha mahalala ny sokanjin-dran’izay iresahany .
Finoanoam-poana malaza eto Korea sy any Japana ihany ity fampizarazarana ny toetra mampiavaka ny olona amin’ny alalan’ny sokanjin-dra ity.
Mahafinaritra ilay izy raha atao kilalao, fa miteraka olana amin’izay raha mitarika ny olona hitsaratsara fahatany no mahatonga ny olona hiafinafina. Porofon’izany, maro ny tandrefana no tsy mahalala akory ny sokajin-drany ary tsy misy fizarana famenoana sokajin-dra eo amin’ny fehinteny. Dia mieritreritra ry zareo fa mahaliana ny mitsara ny olona araka ny sokajin-drany.
Tsy misy azo anaporofoana fa tarihin’ny sokajin-drany ny toetra mampiavaka ny olona iray. Raha hanontany ny mpianatra vahiny isika dia mety hanontany ry zareo hoe “hay ve misy an’izany koa e?”
Mihevitra I Dcinside fa mety ho azo raisina ho fahalalana io amin’ny fotoana ho avy, na dia tsy marim-pototra aza ny ny petra-kevitra aminy.
Eo amin’ny 80%n’ny vehivavy iresahany no mino fa manefy toetra ny sokajin-dra. Mazava loatra fa tsy mitombina izany amiko ary tsy mbola nahita Gazety-boky na takelaka miompana manokana momba ny vehivavy niresaka momba izany koa aho. Mety ho diso eo amin’ny 5% eo ho eo aho. Mety hoe azo ekena noho ny fitsaboana nentim-paharazana koreana ity…ary arivontaona maromaro any, hono, dia nisy nihady ka nahita kisendrasendra izay boky milaza izany; dia mety hanizingizina ry zareo fa izany no fahalalan’ny Ntaolo. Mety hitovy lanja amin’ny Dong-eui-bo-gam (bokim-pitsaboana nentim-paharazana Koreana malaza indrindra).
Misy aza ny karazana tonombintana ahalalana toetra avy amin’ny fahafantarana sokajin-dran’ny olona iray miaraka amin'ny tononandro nahaterahana. Indreto ange mba vakio ny santionany voalohany mamaritra toetra araka ny sokajin-dra e:
* 혈액형 형제.자매만 알면 성격이 보인다 *
덕목 중 하나라는 것을 기억하자
Afaka mamantatra ny toetra manavaka ilay olona ianao araka ny sokajin-drany:
Sokajin-dra A, ilay mpanofinofy tantaram-pitiavana mahasondriana.
Olona mora andairan-javatra. Mora maratra na dia amin’ny zavatra kely tsy dia manao ahoana aza ary mora tohina tafahoatra. Mieritreritra mandrakariva eny an-dalana, mitady ny heviny fa tsy mahazo (ny dikany). Fa raha manafina ny eritreritrao ianao, dia tahaka ireny olona mahafinaritra mihevitra ny hafa sy mikarakara ny manodidina ireny. Manadino ny zavamisy ary minomino tontolo tena mahafinaritra. Tsy mahagaga raha mitady fanatsaran-javatra mandrakariva ianao rehefa manao zavatra.
Falifaly mpijery lafitsaran-javatra ny sokajin-dra B
Mankafy fiainana, mihomehy na dia eo sendra tsy fahombiazana aza. Mitady hirona amina tantaram-pitiavana mahafinaritra ka mety tsy mifanojo amin’ny zavamisy izay eriteretina. Fa rehefa mankafy ny fiainana loatra ianao dia ho mety ho maro fahavalo. Tsara raha miala amin’ny toetra mora miraviravy tanana. Ary tokony hieritreritra ny antony mahatonga anao mora miala an-daharana sahala amin’izany…
Mpitarika (sefo fokontany?) azo itokisana tsara ny olona manana sokajin-dra O
Mamy hoditra ary tsara fitondra olona. Izay fahatsaran-toetranao izay no tsy mamela anao handao ny olona tra-pahasahiranana. Lasa ataonao feno alahelo ny fiainana, hany ka mety ho tsy azon’ny manodidina anao ny ainy. Aza adino fa misy misy fifaliana ihany koa anaty fiainana. Mirehareha tena tsy tia tapahinteny. Tianao ny miaina araka izay saininao, saingy mety hivadika poizina ho anao ny fitokisatena tafahoatra. Raha tsy nahomby ianao dia mahatsiaro lavo (midaraboka) noho ny fitokisanao. Raiso mora ihany ary aza adino fa tsy hahomby mandrakariva ianao fa mety mandamoka ihany izay ataonao.
Olona manana faharetana sy fifantohana ny manana sokajin-dra AB
Afaka manao ny zavatra rehetra ianao noho ireo toetra roa ireo. Ataonao milamina dia misesy tsara ny zavatra rehetra rehefa miaramiketrika amin’ny hafa. Marani-tsaina be rehefa liana politika sy tontolo iainana. Lasa manery ny hafa amin’ny tsi-fahalalana ka vinitra tahaka ny adala rehefa be baikobaiko. Aza manambanimbany ny hafa. Tadidio fa mila hajaina ny hafa ary manana ny fomba fiainany ihany koa.
Misy karazan-toetra hafa araka ny sokajin-dra ihany koa ary na oviana ianao na inona na inona tononandronao mamaky ity blaogy ity.
Dia maneho hevitra ny hafa hoe “ ataovy fanalan’andro re io fa aza itompoana tahaka ny an’ny mpino ny finoany.” Sy ny hoe “ tahaka nympamosavy izany izay olona mitady sokajin-dra B”. Inoanao ve io peta-kevitra io?
Ity ary misy oronantsarimihetsika maneho aza anie fa samy manana ny fomba fiadiny araka ny sokajin-drany ny olona e!
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraHyejin Kim
Tantaran'ny Korea Atsimo farany 08 Febroary 2015Azia AtsinananaZazavavy Malayziana Norahonana Hogadraina Fa Nifamihana Ampahibemaso Tamin'ny Kintan'ny K-Pop
04 Janoary 2015OseaniaHigadona Ny Amboara Aziatika 2015 Ao Aostralia
05 Desambra 2014Azia AtsinananaAfaka Mijery Fahitalavitra Amin'ny Youtube Ny Rehetra Afa-tsy Ny Koreana Tatsimo
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, polski, English